Chivhoni cheDutch, Skillets, Grill Pan, Casserole - DINSEN
YEMAHARA DINSEN Musiki wehupenyu huri nani
Dinsen Impex Corp inotarisa mukuenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi hwekuvandudza simbi cookware kuvandudza, hunyanzvi uye kugadzira. Zvichakadaro isu tinopawo OEM, ODM, uye mamwe masevhisi.
Fekitori yedu inotenderwa ne ISO9001: 2015 & BSCI, uye inoshongedzwa neDISA-matic yekukanda mitsara uye pre-mwaka yekugadzira mitsara, enamel mitsara, uye akazara ekuyedza maturusi. Kutenda kunzvimbo dzemazuva ano dzekugadzira, zvivakwa zvakakwana zvekuchengetedza zvakatipoteredza, maitiro ekugadzira akaenzana, mahunyanzvi ehunyanzvi uye yakakwana test system, yedu simbi yekubheka zvigadzirwa zvakatumirwa nekukurumidza kunze kwenyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu, seGerman, Britain, France neUnited States nezvimwe, uye isu takavaka kwenguva yakareba zvine hungwaru pamwe nevatengi vedu. Dinsen achachengeta basa rekuvandudza hupenyu hwevanhu, kushanda takabatana nevatengi vedu uye vatinoshanda navo kumba nekune dzimwe nyika, kukudziridza nekutengesa zvakapfuura, hunyanzvi, hunyanzvi enamel kukanda vabiki.
DA-C25001 / 29001/33001/37001 vakakanda simbi mukuru Q ...
DA-DO21001 / 25001/29001 yepamusoro kukanda simbi ...
DA-DO31001 yakakanda simbi yekubika 2020 inopisa inotengeswa
DA-DO19001 / 20001/21002/24001/27002/27003 vakakanda ...
DA-S26001 yakagadzirwa muChina yakakanda simbi 2020 inopisa kupisa
DA-S13003 / DA-S16002 / DA-S20003 vakakanda simbi eco -...
DA-S22002 / DA-S20005 eco-ushamwari vakakanda simbi c ...
DA-BC37001 2020 inopisa inotengesa cookware yakagadzirwa mu c ...
DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 kukanda simbi ...
Mvura yakasimba muHenan
Pamazuva mashoma apfuura, Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng nedzimwe nzvimbo muProvince yeHenan vakatambura zvakanyanya kunaya. Maitiro aya airatidzira hunhu hwemvura zhinji yakaunganidzwa, kwenguva yakareba, yakasimba kunaya kwenguva pfupi, uye kwakanyanya kunyanyisa. Iyo Central Meteorological Observa ... / p>
Dinsen anopemberera makore zana ekuberekwa kweCommunist Party yeChina！
Makore zana, rwendo rwekukwira nekudzika. Kubva padiki diki tsvuku kuenda kune hombe ngarava iyo inotungamira kugadzikana kweChina uye rwendo rurefu, ikozvino, Communist Party yeChina yakazopedzisira yasvitsa makore ayo ekuberekwa kwezana ramakore. Kubva pane yekutanga Marxist bato ine inopfuura makumi mashanu mapato ebato, ine ... / p>